Izigwebo eziqhelekileyo kwiMigaqo yeGalofu
Izigwebo eziqhelekileyo phantsi kweMigaqo yeGalofu
Yiyiphi i sohlwayo? Nazi ezinye eziqhelekileyo
Ndiphantse ndibize ngokuthi "ishidi lokukopela" ngaphambi kokucinga ngcono. Eli phepha lubhala ezinye zeentyala eziqhelekileyo kunye nezohlwayo phantsi kweMigaqo yeGalofu.
Amanye amaKlabhu kwi-Bag kunokuba avunyelwe ( Umthetho 4-4 )
Iiklabhu ezilishumi elinine zivunyelwe kakhulu. Isohlwayo ngokudlulayo kwe-14 kumdlalo wokufanisa kukulahlekelwa ngumngxuma kumngxuma ngamnye apho ukuphulwa kwenzeka, ukuya kwiindawo ezimbini. Ngomdlalo wokubetha, injelo yimiba emibini kwisango ngasinye apho kuvele ukuphulwa, ukuya kutsho emine imivimbo emine.
Amanqaku angalunganga aqoshiwe kwi-Scorecard ( Umthetho 6-6d )
Isohlwayo sokusayina ikhadi lekhadi elibandakanya amanqaku aphantsi kunoko aqoshiwe. Akukho sihlwayo sokusayina i-scorecard ephazamisa ngokungalunganga amanqaku omdlali, kodwa amanqaku aphezulu ame.
Ukudlala ngaphandle kokujika ( uMgaqo 10 )
Akukho sihlwayo sokudlala. Ngaphandle kokugxeka kwamanye amalungu eqela lakho. Ngomdlalo womdlalo, umqhubi unakho ukhetho lokukwenza uphinde wenze umfanekiso wakho wokudlala.
Ukugxotha iKlabhu kwiNgcembeko ( uMthetho 13-4 )
Ukugxotha ibhola kwiingozi akuvumelekanga. Nabani na owenzayo kufuneka ahlole ngokwawo (okanye ahlolisise) isohlwayo se-2-stroke (okanye ukulahlekelwa komgodi kumdlalo wokudlala).
Ukubetha iFlagijeki engasilindelekanga ngePett ( uMthetho 17-3 )
I-flagstick ikulo mgodi, ungalindelanga, kwaye i-putt yakho ibetha. Yiyo isohlwayo se-2-stroke ekudlaleni kwesibalo (ibhola ngokukhawuleza idlala njengoko lilele) kunye nokulahlekelwa komgodi kumdlalo wokufanisa.
Ibhola lihamba emva kweDilesi ( Umthetho 18-2b )
Ukuba ibhola lakho lihamba emva kokuba uthathe idilesi yakho, kuyilwaphulo e-1. Ibhola ithathelwa endaweni yayo yangaphambili.
Ibhola lihamba emva kokunyanzeliswa kwe-Loose isuswa ( uMthetho 18-2c )
Abadlali banako ukususa izithintelo ezingavumelekanga ngaphandle kwesigwebo xa nje ibhola kunye nesithintelo esingavumelekanga akuzona zombini inengozi.
Ngaphandle kokuluhlaza, ukuba ibhola ihamba xa kukho nayiphi na isithintelo esingavumelekanga ngaphakathi kwebhulabhu enye ibhola isuswe, kuyisilathiso se-1. Ibhola ithatha indawo endaweni yangaphambili.
Ibhola eMngciphekweni wamanzi ( uMthetho 26-1 )
Ukuba ufumana ibhola yakho engozini yamanzi, unako ukuzama ukuyidlala ngaphandle kwesihlwayo. Kungenjalo, yinto yokugweba-kunye kunye nomda. Ikhetho 1: Thatha isigwebo se-1 kunye nokubuyela kwindawo yokuqala edutshulwa ukuze udlale kwakhona. Inketho yesi-2: Thatha isigwebo se-1 kwaye usiye ibhola emva kwengozi yamanzi (ukubuyela emva kokufuna kwakho), ukugcina indawo apho iplantshi yangaphambili yawela khona ingozi ngqo phakathi kokula kwakho kunye nomgodi. Ngengozi yamanzi yangaphambili, yehla phakathi kwamacandelo amabini eeklabhu kwindawo apho ibhola liwela khona umda wengozi (ayikho kufuphi nomngxuma), okanye kwicala eliphambene nenengozi kwindawo e-equidistant.
Ibhola elahlekile okanye ngaphandle kweBounds ( uMthetho 27-1 )
Stroke kunye nomgama. Thatha i-penalty-1 yesihlwayo uze ubuyele kwindawo yemboniso yokuqala ukuze udlale kwakhona. Ibhola lexeshana lidlalwa ngaphambi kokufuna ibhola yokuqala.
Ibhola elingadlalwanga ( Umthetho 28 )
Unokwazi ukumemezela ibhola elingabonakaliyo naphina ngaphandle kwengozi yamanzi, kwaye wena uyenajaji oyedwa nje ukuba ibhola yakho ayinakwenzeka.
Ukumemezela ibhola engabonakaliyo kukhokelela kwisigwebo se-1 kunye nokuhla. Yehla ngokukhawuleza kunokwenzeka kwiindawo zamanga ezingabonakaliyo; ngaphakathi kweekhilo ezimbini zeeklabhu kwaye kungekho ngaphaya komgodi; okanye ngasiphi na indawo emva kwendawo yamanga okuqala, nje ngokuba loo ndawo ihlala phakathi kwendawo kunye nendawo yokubhola ibhola.
Ngaba iya kutshaya okanye ukulimala kwamaCraphite Shafts?
Inkxaso ye Bowling
Yiyiphi 'Out' kunye 'In' Ethethayo xa ibonakala kwi Scorecard
Iimpazamo eziqhelekileyo ezenziwe ngabantu abaqalayo
Indlela yokunika i-Spot
Ukuphuhlisa imilenze yakho yesihluthu
I-Cheerleading Fun Facts & History
Ukuchaza i-Kickpoint Kwii-Shafts ze-Golf kunye nendlela echaphazela ngayo amaShotshi
IJazz ngeShumi: ngo-1940 ukuya ku-1950
Ukuqonda IJam Jamming kunye nendlela Edala Ukutshintsha Kwezentlalo
I-Biellmann I-Cool Figure Skating Move
I-Classical Guitar Music CD Awufanele Uphile Ngaphandle
Ipeyinti kwi-Canvas engavumelekanga
Amazwi okugqibela atyhulwe ngabenzi bezono abaziwayo
Inkcazo ye "Dork" ayinanto yokwenza ngeeminyango
Izizathu zokuba sifanele sifunde isiNgesi ngegrama
Ii-Six Luxury SUVs kunye neCrossovers ngeClassi
Intshayelelo yokuzalwa yesiNgesi ngesiTshayina
I-Green Sea Urchin Facts
Ngaba Zonke iiRays Sting?
Kutheni Lo Mkhosi Wobuthakathakhe Ugxobhoza Amaqonga?
URichard Wagner - I-Cycle Ring
Iinqwelo eziphezulu ze-Aftermarket ezi-5 eziphezulu
Indlela yokuBonakala kwiiKhuthuthu
Indlela Yokufumana Efanelekileyo Ukubamba Ibhola
I-Osmotic Pressure kunye neNewicity
Ziyintoni i-Symmetry eBurateral?
U-Aries kunye noGemini Uthando olufanelekileyo
Iinjongo zeJava ifom yeSiseko sezicelo zeJava
24 Amazwi afanelekileyo Ukuboleka kwezinye iilwimi